Soosaarka Cadka - Ningbo Intech Intelligent Technology Co., Ltd.
Darawallada Silsiladda Yankee
Cutubyada 'Yankee silsilad wadaha' waxay soo bandhigaan tikniyoolajiyad casri ah oo cusub si ay ula kulmaan shuruudaha mashiinnada unugyada xawaaraha sare leh ee maanta jira. Gawaarida Yankee-silsiladdu waxay leedahay qaab-gaar ah oo horay u-gaar ah oo xamuul ah, hagaajinta qaybinta xamuulka, xasilinta hawlgalka qaybta qalabka 'Yankee' oo sidaas awgeedna loo kordhiyo nolosha dhalista. Intaas waxaa sii dheer, Yankee Drive-keeda jiingadda waddo jiifka ah wuxuu bixiyaa dayactir fudud iyo kharashka nolosha yar.
Loo sameeyay si gaar ah codsiyada mashiinka nudaha, cutubyada 'Yankee dhululubada wadayaasha' waxaa loo farsameeyay si ay u noqdaan kuwa qiimo ku ool ah iyo dayactir saaxiibtinimo si hoos loogu dhigo qiimaha guud ee lahaanshaha macaamiisheenna.
Ikhtiyaarrada hal iyo laab ee la heli karo
Qiyaasta gudbinta (5-140: 1)
Qaab-dhismeedka kharash-ku-ool ah iyo dayactir
Qiimaha meertada nolosha oo hooseysa dayactirka fudud awgeed
Xalka ugu fiican ee wax soo saarka mashiinnada nudaha wax laga beddelay
Guryeynta naqshada sare
Awood u lahaanshaha ilaa 42 kN xoogagga foosha
Lagu qalabeyn karaa nidaamka wadista Axadda